Waa maxay faa'iidooyinka tatoosku? | Ragga Stylish
Alicia tomero | | Daryeelka shaqsiyeed, fashion, Isbeddellada
Tattoos waa sawiradaas ku duugan maqaarka, iyagoo soo bandhigaya midabbo hoosta epidermis. Maanta tattoo wuxuu ku dhex jiraa dad badan, wuxuu dejiyaa isbeddel mar kale, laakiin mar kale ayaa wax laga weydiinayaa dhaqankiisa sababo caafimaad awgood.
Tattoo-ku wuxuu ku jiray dhaqamo kala duwan kumanaan sano taasna maahan sababta aan u joojineyno inaan is-tirinno, waa bilic, waxay kordhisaa isku kalsoonaanta waxayna u horseedi kartaa xusuus weyn. In kasta oo ay tahay inaanan iloobin in badan oo naga mid ah ay ku argagaxeen inay sameeyaan tattoo.
Ama cabsi laga qabo in maqaarkayaga waxyeello loo geysto, si aan ugu daalno sawir ka bixi doona qaabka ama aan u maleyno in aan ku dhici karno kansarka maqaarka ... kuwani waa qaar ka mid ah dhinacyada naga dhigaya inaan ka fikirno ka soo horjeedka marka aan sawireyno sawir .
Markaad go aamineyso Aynu khalad ka dhigin inaan nafteenna ka dhigno mid si gaar ah moodada, maxaa yeelay waxaan ognahay in halkaas lagu duubi doono weligiis oo ay kugu kici doonto wax badan oo aad ku tirtirto. Ha la sameysan tattoo qof lammaanahaaga ah sidoo kale, waa qalad kale oo weyn, maxaa yeelay cilaaqaadka waa la jabin karaa oo xusuusta ayaa weli taagan
Tattoo-ka miyey runti faa'iido leeyihiin?
Daraasad ayaa waxaa sameeyay seddex cilmibaaris oo ka socda jaamacada Alabama (Mareykanka) waxaana la cadeeyay inay faa iido leeyihiin. Jidhkeenu wuxuu abuuraa difaacyo badan oo dheeraad ah marka ay timaaddo inaan isqurxino dhowr jeer. Waa mid ka mid ah jawaabaha ku habboon, inkasta oo aad ogaan karto faa'iidooyin badan oo dheeraad ah:
Hagaajinta habka difaaca jirka, inkasta oo ay u muuqato wax aan macquul ahayn. Heerarka immunoglobulin A (antibodies) ayaa kordha markaan horey u sameysanay tattoo waana in la baaray. Tijaabada waxaa lagu sameeyay dadka horay loo xardhay iyo kuwa aan la taaban, halkaas oo lagu sameeyay si loo arko jawaabtooda Dadku markii horeba way xardheen muu muujinin hoos udhaca immunoglobulin A, halka dadka markii ugu horeysay la sawiray ay sameeyeen. Waana taas kuwa horeyba u ogaa waxa ay tahay adkeysiga tattoo waxay yaqaanaan sida loola tacaalo xanuunka iyo nabarrada, iyagoo difaaca ka ilaalinaya.
Waxay yareeyaan buuqa iyagoo yareeya heerarka 'cortisol'. Hormoonkan ayaa mas'uul ka ah soo saarista culeyska jirkeena iyo yeelashada badan oo jirka ah wuxuu yareeyaa cortisol. Waxaan ogaan karnaa hoos udhaca madax xanuunka ama madax xanuunka dhanjafka, culeyskeena sifiican usii hayno, xakameyno xiisadeena ama xitaa ogaano horumar dhanka xasuusta ah.
Waxay gacan ka geystaan ​​hagaajinta saameynta tallaalka DNA. Waa hab kale oo lagu durayo tallaal, si badbaado leh iyo in la siiyo qadaryo badan. Nidaamkeedu wuu ka xanuun badan yahay tallaalka fudud inkasta oo ay u muuqato wax la yaab leh haddana waa nooc ka mid ah soo dhexgalid, oo leh waxqabad aad u weyn waana horeba loo soo bandhigay. Khadkan Tattoo-ka ah looma adeegsan sidaa darteed wax dhib ah malahan ka fikirka inay joogto noqon karto.
Waxay kordhiyaan isku kalsooni, waa wax cusub oo aad jeceshahay inaad muujiso. Waxaa soo baxday in aysan sahlaneyn in la go’aansado markay tahay in la sameeyo tattoo, laakiin haddii go’aanka uu adag yahay waxay keeneysaa kalsooni weyn. Waxaa jira dad markay, markay sawiraan, ay la kulmeen isbeddel ku dhaca niyadda. Nidaamku wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan oo xitaa kuwa ay soo martay nooc ka mid ah niyad-jabka noloshooda.
Ma yihiin kuwo balwad leh? Waxaa la sheegay inay abuuraan balwad sababo la xiriira xaddiga endorphins ee aan sii dayno markii aan helno sawir. Jidhkeenu wuxuu ku jawaabaa endorfin marka ay xanuun dareemaan si loo yareeyo, saameyntani waxay si aan ula kac ahayn nooga dhigeysaa natiijadaas. Irbadda daloolinaysa maqaarka waxay abuurtaa xanuunkaas iyo jidhku wuxuu ku jawaabaa endorfin si loo yareeyo dareenkaas xun.
Dad badan ayay u tahay farshaxanka muujinta jirka, waxay u haystaan ​​inay tahay hab ay naftooda aad ugu qiimeeyaan. Micnaha taatuuga ayaa noqon kara mid aan xad lahayn oo badankood waxaan u tarjumi karnaa khibrad, fikir ama xusuus wax ku ool ah.
Waxay qariyaan dhibco iyo nabarro. Waa ikhtiyaar aad u qurux badan kuwa doonaya inay ku qariyaan qaybtaas qurxoon ee sawir leh. Xitaa waxaa jira dad isticmaala sawir gacmeedka si ay ugu beeraan dusha mid kale oo aysan mar dambe jeclayn.
Waxaa jira goobo shaqo oo horeyba sharad ugu galay saxiixa dadka leh jirkooda la xardhay. Waxay umuuqataa wax lala yaabo in la maqlo in maanta wixii ka soo horjeedaa ay ku dhici karaan waxa diidi kara sannado ka hor. Raadinta sida loo helo tattoo? Waxaan haynaa dhowr qaybood oo aan kuu sheegeyno sida aad ku bilaabi karto sameynta mid tattoo xarrago leh.
Haddii aad ubaahantahay inaad waxbadan ka ogaato habsocodka tatooska waad awoodaa halkan ka aqriso. Noocyada iyo noocyada sawirada meelaha kala duwan ee jirka waxaad ka akhrisan kartaa nooca sawirada la sameeyay gacmaha, dhabarka o Tattoo yar qaybaha kala duwan ee jirka. Tattoo-ka Samoan Iyagu waa kuwa inta badan sharad lagu galay si loo daboolo aagag ballaaran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Waa maxay faa'iidooyinka tatoosku?